“अब म यहाँबाट कहाँ जाऊँ ? निस्कने बाटो छ ?” – WicketNepal
“अब म यहाँबाट कहाँ जाऊँ ? निस्कने बाटो छ ?”
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ श्रावण ३, शुक्रबार २३:३७
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जिम्बाबे क्रिकेटलाई निलम्बन गरेपछि जिम्बाबे क्रिकेटरहरुले निराश हुँदै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बिहिबार लन्डनमा बसेको आईसीसको वार्षिक सम्मेलनमा सर्वसम्मतिले जिम्बाबे क्रिकेटलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आईसीसीले जिम्बाबेलाई आईसीसीले आयोजना गरेको प्रतियोगिता खेल्न समेत रोक लगाएको छ भने जिम्बाबे क्रिकेटलाई दिने बजेट समेत रोक्का गरेको छ।
निलम्बन पछि जिम्बाबेका स्टार क्रिकेटर सिकन्दर राजाले आईसीसीको निर्णय बारे ट्वीट गर्दै घोर निराशा व्यक्त गर्दै ट्वीट गरेका छन्।
“कसरि एउटा निर्णयले एउटा टिमलाई अपरिचित बनाएको छ, कसरि एउटा निर्णयले धेरैलाई वेरोजगार बनाएको छ, कसरि एउटा निर्णयले यति धेरै परिवारलाई असर गरेको छ, कसरि एउटा निर्णयले धेरैको करियर बर्बाद गरेको छ, पक्कै पनि यसरी मैले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई विदा गर्न चाहेको थिईन” राजाले जिम्बाबेको लागि १२ टेस्ट, ९७ एकदिवसीय र ३२ टि-२० खेलीसकेका छन्।
यस्तै राजाले इएसपीएन क्रिक्इन्फोसंग कुरा गर्दै यसरी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको अन्त्य हुने कहिल्यै नसोचेको लेखेका छन् –
“हामि अझै सदमामा छौ यो देखेर कि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय करियर यसरी अन्त्य हुनेछ भनेर। एउटा खेलाडीको लागि मात्रै हैन, पुरा देशको लागि।”
“मलाई थाहा छैन अबको बाटो के हो। हामीलाई बताईएको छ कि निलम्बन गरिएको छ तर कहिलेसम्म बताईएको छैन। २ वर्षको निलम्बनले धेरैको करियर बर्बाद हुनेछ। मलाई परिस्थिति थाहा छैन तर हामीलाई क्रिकेट खेल्न पूर्णत निलम्बन गर्नु कसरि सम्भव हुन सक्छ। मलाई थाहा छैन कसरि कसैले यो गर्न सक्छ जुन हामिसंग घटेको छ”
राजाले अब जिम्बाबे क्रिकेटरले बैकल्पिक रोजगारको बाटो रोज्नु पर्ने डर लागेको बताएका छन्।
“मलाई थाहा छैन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरको रुपमा हामि कहाँ जाने। क्लब क्रिकेट या कुनै क्रिकेट छैन हाम्रो लागि ? अब क्रिकेट किट जलाएर जागिरको लागि निवेदन दिने ? मलाई थाहा छैन अब के गर्ने।
यस्तै अर्का जिम्बाबे स्टार क्रिकेटर ब्रेण्डन टेलरले पनि निलम्बन बारे ट्वीट गरेका छन्-
“क्रिकेट जिम्बाबेलाई निलम्बन गरेको खबरले दिल टुटेको छ। जिम्बाबे क्रिकेटसंग अहिलेसम्म कुनै सरकार छैन। तै पनि हाम्रो अध्यक्ष एउटा सांसद हो ? सैयौं इमान्दार मानिस, खेलाडी, सपोर्ट स्टाफ, ग्राउण्ड स्टाफ जो जिम्बाबे क्रिकेटमा निर्भर थिए अब बेरोजगार भएका छन्।”
@ICC It’s heartbreaking to hear your verdict and suspend cricket in Zimbabwe. The @ZimbabweSrc has no government back round yet our Chairman is an MP? Hundreds of honest people,players, support staff,ground staff totally devoted to ZC out ofajob,just like that. ?
सोलोमन मायरको सन्यास
जिम्बाबे क्रिकेट निलम्बनमा परे पछि जिम्बाबे क्रिकेटर सोलोमन मायरले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। ३० वर्षीय मायरले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै सन्यास घोषणा गरेका हुन्। उनले जिम्बाबे क्रिकेटको लागि आईसीसीको कदम दुखद रहेको र यही घडीमा आफुले नयाँ बाटो खोज्ने निर्णय गरेको लेखेका छन्।
“यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि यस्तो हालतमा यसरी क्रिकेट छोडेर जानु परिरहेको छ जुन मेरो नियन्त्रणमा छैन। तर मैले एउटा नयाँ दिशामा कदम उठाउने निर्णय गरेको छु”